KULANKII DAWLADDAHA XIISEEYA SIYAASADDA SOOMAALIYA OO KA DHACEY ISTOKHOLM - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
KULANKII DAWLADDAHA XIISEEYA SIYAASADDA SOOMAALIYA OO KA DHACEY ISTOKHOLM
Publicerat torsdag 31 augusti 2006 kl 15.23
Magaalada Istokholm xarunteeda wasaaradda arrimmaha dibadda waxaa ka dhacey 29-kii bsha Agoosto kulan ey isugu yimaadeen dawladdaha xiiseeya siyaasadda Soomaaliya.
Xubnaha dawladdaasi oo ey ka mid yihiin dalka Iswiidhen ee martida loo yahey, Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, ururka Miodwga Yurub, ururka Jaamicadda Carrabta, kan Midowga Afrika iyo dawlado Afrikaan ah oo ey ka mid aheyd Tanzaaniya iyo dalka Keenya oo la sheegey iney ka baaqsadeen kulankaasi.
Kulanka ka dhacaya magaalada Khartuum ee ey ku kulmayaan xubno sare ee ka socda dawladda Federaalka ku meelgaarka iyo ururka Maxaakiimta ee gacanta ku dhigey maamulka Muqdisho, ayey sheegtey Annika Söder in aannu aheyn rajadii ugu dambeeysey ee masiibada Soomaaliya.
- Waxaan ku dadaaleynaa in sabaalo iyo cabsi gelin, dul iyo hoosba aan ugu dhigno sidii ey wadahaddallada Khartuum uga soo bixi lahaayeen go’aan dan u ah shacbiga soomaaliyeed. Sidaasina waxaa sheegtey Annika Söder - xooghayaha guud ee wasiirka taakuleynta.